Imenyu yokuma. Yintoni imenyu yokuqulathiweyo kwaye yeyantoni | Iindaba zeGajethi
Umzekelo wemenyu yomxholo
Namhlanje siza kubona yintoni imenyu yomxholo kwaye yenzelwe ntoni. Siza kubona ukuba imeko yemenyu itshintsha njani kuxhomekeka kwindawo yesikhombisi eskrinini kwaye ngakumbi nangamava ndiza kunika ulwazi ngendlela yokutshintsha imenyu yokufaka ngokongeza okanye ngokususa izinto kuyo. Kulungile masiqale ngenkcazo "yemenyu yokuma".
1 Uthini umxholo wemeko?
2 Yintoni imenyu yokuqulathiweyo?
3 Imenyu yomxholo weWindows XP
4 Imenyu yokuqulathiweyo yefayile
Uthini umxholo wemeko?
Imenyu yokuma kunyeiwindow evulayo xa ucofa ekunene impuku. Le menyu yinto ephilayo yenkqubo yokusebenza kuba iguqulwe ngokongeza izinto ezintsha kwimenyu yomxholo njengoko sifaka iinkqubo ezintsha.
Ayizizo zonke iinkqubo esizifakayo ezongeza izinto kwifayile ye- Imenyu yokujonga imeko kwaye kuya kufuneka kuthiwe ngethamsanqa, kuba kungenjalo le menyu inokukhula ngendlela ebaxekileyo, ithintele owona msebenzi wayo uphambili. Nguwuphi owona msebenzi uphambili kwimenyu yokuqukethwe?, qhubeka ufunda:
Yintoni imenyu yokuqulathiweyo?
Imenyu yokuqulathiweyo isebenza ukulungiselela umsebenzi wethu wemihla ngemihla kunye nekhompyuter yethu. Xa sivula imenyu yentsingiselo ngokunqakraza ngeqhosha lasekunene le mouse (ekhohlo ukuba uyilungiselele izinto ezishiyekileyo) sifumana iwindow apho kukho iindlela ezininzi ezinjengokwenza ifolda okanye ukufikelela ngokuthe ngqo, ukucofa ifayile, ukudlala mp3s, ukuskena ifayile kunye ne-antivirus, njl., Kwaye sinokukwenza ngokuthe ngqo kwaye ngaphandle kokuvula inkqubo ebandakanyekayo kwisenzo esikhethiweyo kwangaphambili.
Njengoko benditshilo ngaphambili, kuxhomekeke kwindawo yescreen sakho apho uvula khona imenyu yemixholo, iya kuzisa inkalo enye okanye enye, eyahlukileyo kwizinto ezibonisa okanye eziqulathe kwimenyu yayo. Makhe sijonge eminye imizekelo.
Imenyu yomxholo weWindows XP
Ukuba sicofa ngeqhosha lasekunene lemaqhosha kwindawo yasimahla yedesktop yakho, sifumana le menyu ilandelayo yemixholo:
Kuyo uyakubona yonke into onokuyenza ngezinto ezikwi-desktop yakho, ezinje ngokulungelelanisa imifanekiso. Ukuba sibeka isikhombisi kuyo nayiphi na into yemenyu enentolo kwicala layo, enye imenyu ehlayo iya kubonakala njengoko ubona kumfanekiso ongentla.
Nangona sithetha ngemenyu yokuqulathiweyo yeWindows XP, oku kuyafana Windows 7 kunye Windows 10. Ngaphandle kwento yokuba le nkqubo ihlaziyiwe kuyo yonke le minyaka, imenyu yomxholo isekhona kwaye inentsebenzo efanayo kuyo yonke iinguqulelo.
Imenyu yokuqulathiweyo yefayile
Ukuba sicofa kwifayile imenyu yokuma iya kwahluka ngokuxhomekeka kwifayile ukwandiswa enayo loo fayile (ifomathi yayo). Umzekelo, le yimenyu yokuqulathiweyo yefayile kunye nolwandiso PDF.
Kule menyu sibona izinto ezingakhange zibonakale kwifayile ye- Imenyu yokujonga imeko ukusuka kwidesktop yeWindows, ezinje ngo "Skena ..." ukukhangela kwi-antivirus ukuba ifayile yePDF ayinazintsholongwane okanye ezinye izoyikiso ezaziwayo. Sikwabona into "IZArc" evula imenyu yesibini esinokuthi ngayo cinezela ifayile yePDF isebenzisa isiguquli IZArc.
Kodwa njengoko senditshilo, le menyu iya kwahluka ngohlobo lwefayile esiyibiza ngayo. Umzekelo, ukuba sivula imenyu yokuma ngokunqakraza ekunene kwifayile yeDOC (ifayile yeWord) endaweni yefayile yePDF, sifumana le menyu ilandelayo.
Njengoko ubona, le menyu ibanzi kakhulu kunangaphambili kwaye ikwabandakanya ukhetho lokuprinta olungakhange luziswe yenye imenyu yokuqulathiweyo.
Singafumana ezininzi iimenyu zemeko ezahlukeneyoSele sizibonile ezinye kodwa iiyantlukwano azipheli, phantse kuzo zonke iinkqubo siya kufumana iimenyu ezinokusinceda senze imisebenzi ngokukhawuleza ngaphandle kokuhamba kwiibhola zesixhobo senkqubo nganye. Ke siza kubona kuphela imizekelo esele ibonisiwe.
Ndifuna ukucacisa namhlanje ukuba zeziphi iimenyu zemeko kwaye ziyintoni na kuba ngaloo ndlela kwizifundo ezizayo ndiza kubhekisa kubo kwaye ukuba umntu akazi ukuba zithini iimenyu zomxholo, baya kuyeka apha ukufumana umbono.
Kwabo bafuna ukwazi ngakumbi ngeemenyu zentsingiselo, ndiza kukuxelela ukuba kunokwenzeka ukuba ubanike ikhowudi ngokongeza okanye ngokususa izinto kuyo. Ngelixa eminye yale misebenzi inokwenziwa ngokulula, ezinye zinzima kakhulu kwaye zingaphaya kwenqaku. Olunye usuku siza kubona indlela yokwenza ngokulula ezinye uhlengahlengiso kwimenyu yokuma. Okwangoku kunye nakwabo bafuna ukulawula ngokupheleleyo imenyu yokuma, ndincoma ukuba ufunde eli nqaku malunga nemenyu yokuqulathiweyo, kodwa NGESILUMKISO esicacileyo, inqaku alikhuthazwa kubasebenzisi abanamava kunye nabangenamava njengoko kufuneka usebenzise irejista yeWindows ukuguqula imenyu yokuma. Kwelinye icala, ndincoma ukuba wonke umntu onamava ngakumbi makaqwalasele inqaku kunye nephepha le Erwind ried.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Imenyu yomxholo
Molo ndifuna nje ukuthi eli phepha lenzelwe kakuhle kwaye ndiyathemba ukuba bayaqhubeka nokwenza amaphepha kube lula ukuwaqonda kwaye bayasichaza njengokuba nawe usenza, Siyavuyisana kwaye ndiyabulela ngokubeka ixesha lakho kumaphepha okwakha ukuze thina basebenzisi eyona nto ibalaseleyo Le super dad
Ndonwabile ukuba uyalithanda iphepha, ndikuthumela umbuliso omuncu ngamazwi akho anobubele.
Kuya kufuneka ube nenxalenye yemenyu yokuqulathiweyo
heyy enkosi ngolwazi 😉 lindincedile kulo msebenzi… imibuliso 🙂
heyy enkosi ngolwazi endikhonze ngalo msebenzi ... imibuliso
hey undincede ngomsebenzi wam wasekhaya… ubabalo
Molo, ndicinga ukuba ibhlog yakho ilungile.
Kodwa ndinengxaki kwimenyu yePC yam kwaye ndingathanda ukukuxelela ngayo ukuze ubone ukuba ungandinceda na. Kuyenzeka ukuba xa uvula i-MiPC kwaye ucofe ekunene kuyo nayiphi na idiski yediski, nokuba yidiski ekhuni, i-usb okanye i-cd drive, ikhompyuter ayiphenduli kwaye ayivuli imenyu yokuma. Kodwa ku-MyPC kuphela, kuba kwiifolda ukuba uvula imenyu yomxholo. Ingaba Ungandinceda Nceda???? Andazi ukuba ndenzeni okanye ndingalufumana njani uncedo kule ngxaki.
gem !! sitsho
enkosi kakhulu ngolu ncedo
Kuya kufuneka undincede kakhulu
yomsebenzi wam wasekhaya wekhompyuter
kwaye ngaphandle kulula kakhulu kuba unokukopa
ngu: gem :);)
Phendula kwi-gem !!
@Pao uninzi lomlawuli wenkqubo unokukhetha ukukhubazeka. Ukuba nguwe kuphela osebenzisa ikhompyuter, unokuba nentsholongwane.
Molo: ndilithandile iphepha lakho. Ndifikile kuyo kuba ndinengxaki nemenyu yokuma kwimeko; jonga ukuba ungandinceda:
Ndirekhoda iifayile zezwi ngombhobho. Ndingathanda ukuba, xa ndiza kwenza enye, ukuze ndikwazi ukuyenza ngefolda imenyu yokuma, cofa ku «Entsha», kwaye, apho, kanye njengokuba ndifumana ifayile yeLizwi eNtsha, okanye ifayile entsha yePowerPoint , Ndifumana ukhetho ifayile entsha yelizwi, okanye i-wav, ukuyinika igama, kwaye emva koko, ukuze ndikwazi ukuyivula ngokuthe ngqo kwinkqubo yokurekhoda, ngaphandle kokuyigcina ndiyibize ngegama ngoko.
Inokwenzeka loo nto, kuba emsebenzini iyasebenza (zi windows 2000), kodwa ekhaya, ayisebenzi (ndineVista). Enkosi ngephepha lakho, kwaye ndiyathemba ukuba, ukongeza kum, umbuzo kunye nempendulo inokuba ngumdla ngokubanzi.
Ewe, andinalwazi lokuba ungayenza njani into oyifunayo nguDamian. Ndikucebisa ukwenza uphando oluncinci kuGoogle njengo "yongeza indlela emfutshane kwimenyu yokuma" okanye "imenyu yokujonga imenyu emfutshane" ukubona ukuba unethamsanqa na.
HEY ENKOSI NGENKCAZELO YANDINCEDA KUNINZI KUMSEBENZI WASEKHAYA
Phendula ku jefferson
UGrace undikhonze kakhulu kwaye uyaqhubeka
eta yokukhaba hahahaha enkosi ngolwazi
Khange ndiyisebenzise le inf kodwa kunjalo tankyou
Ukuba ikhompyuter isetyenziswa ngabantu abaninzi, iakhawunti yakho inokulinganiselwa kwaye awunayo imvume yokuvula imenyu yokuqulathiweyo kwiiyunithi. Ukuba yikhompyuter yakho, inokuba yintsholongwane okanye i-malware. Dlulisa i-antivirus kunye ne-antispyware.
Ewe, inyani yile yokuba bendizazi ukuba iyintoni na, ukuba ndiyicofe ekunene kunye nokusetyenziswa kwayo kunye nokunye, bendingazi ukuba ibizwa njani na, kuvakala ngathi yinto kum, kodwa bendingazi Intoni.
Ewe, khange indincede kodwa ipholile…. kwabanye = (^ ^) =
Ayisiyo yokuba bendiyi-BAa vuzcanDDop kodwa ndiyenzile… <3 !! = (* _ 0) =
Ukuba oku kunceda iidemo, akukho ngxaki !! kunjalo, enkosi
Enkosi, bandincedile ndenza kanye le ndiyifunayo. Bhayi bhayi;)
Molo, ndinengxaki kwaye kukuba xa ndicofa indlela emfutshane endinayo kwidesktop kwidiski yangaphandle, ayivuli kunye nezinye iidiski kwaye iyavela kwiscreen, «Ukufakela nokulungiselela izinto zenkqubo , Sebenzisa iphaneli yokulawula. ulawulo »Ndizamile kodwa khange ndikwazi ukuyenza. Ndiyabulela kwangoko.
molo bekungekho ncedo kum
Ndikhonze amanqaku amaninzi, enkosi, qhubeka
imeyile yam yile jhoncena_12_6@hotmail.com ndongeze 8 ======= D
Molweni mamacitas amantombazana
Igalelo elihle, Siyavuyisana, qhubeka njalo.
Ndinengxaki, xa ndicofa kwifolda enye iwindow yokukhangela iyavela, ungayitshintsha njani inketho yokuvula endaweni yokukhangela kwimenyu yokuma? Okanye wenza njani ukuba ifolda ivulwe? Enkosi
le chid0o mgraxis yandikhonza
Molo, ndifuna ukuba undincede nceda, ndifuna amanyathelo okuguqula umhlathi usebenzisa imenyu yokuqonda .. Ndiyathemba ukuba ungandinceda !!
Indincede kakhulu ... bendicinga ukuba andizukufumana ulwazi endiludingayo ... ndide ndilifumane eli phepha ... enkosi
eli phepha lukhulu enkosi
Unabo (n) ubusuku obuhle
faka ilayibrari ye-regsvr32 C elandelayo: windowssystem32crviewer.dll kwiwindows 7
xa uyenza, indixelela le khowudi ilandelayo 0x80020009
Enkosi kwangaphambili ngqalelo yakho.
hello grax yolwazi iwaka enkosi
Laura cecilia cruz dela cruz sitsho
Phendula laura cecilia cruz dela cruz
EIFFEL JEFELSON sitsho
Enkosi ngolwazi olubaluleke kakhulu kum, enkosi kakhulu
Phendula ku-EIFFEL JEFELSON
Ukukhupha 75 sitsho
molo umxholo we-intanethi awusebenzi kum ndingathini. kusemva kokuba kufakwe i-intanethi 8. Babeke iplagi ebizwa ngokuba sisantya kwaye ndicinga ukuba yile nto ikhubaze iqhosha le mouse kodwa kwi-intanethi kuphela. Enkosi
ayithethi nto inika umdla
Imibuliso kubantu beNkqubo yeZiko laseBarranquilla
JAZMIN MENDEZ INCLAN sitsho
MOLWENI LE CHIDA IPHEPHA LAKHO. PHANTSI KWAZO ZONKE IZIBHALO ZE-LÑA
Phendula JAZMIN MENDEZ INCLAN
Enkosi kakhulu, inomdla kwaye indincede kakhulu
Inomdla kwaye iyaqondakala, enkosi kakhulu
Enkosi kakhulu yandinceda kakhulu emsebenzini wam wophando
ngubani isihogo esindincedayo ngento ekuthiwa siscreen
enkosi killer iviniga bye
Phendula kwi sakura
U-chido guey undikhonze ukuba ndikhumbule imibuliso yothando noxolo kwiikhamera zam zehlabathi
uphinde ubulise ku-sakura mxelele ukuba ndivela kwimibuliso ye-mex kuwo onke amanenekazi amhle isicaka sothando sithi ndlela-ntle
luci kunye nesavi sitsho
ps olu lwazi lusisebenzisile
Umsebenzi wethu wokufundisa
Enkosi kakhulu kwaye siyathemba ukuba xa sinayo
omnye umsebenzi wale ngxaki apha masikhangele entsha
ulwazi ... imibuliso *****
Phendula luci kunye nesavi
Ewe, bekungeyonto iluncedo kum, ukuba yenzelwe enye
Banolwazi olubaluleke ngakumbi 😀
uphambene kangakanani, ndiyaaaayyyyy !!!!
NDIYAKUTHANDA PLEAS !! Ndiyathanda
Molo, ewe, inyani yile, ulwazi lwakho belungenamsebenzi, kulungile, ndiyaxolisa, yinyani leyo.
qhubeka ok uxolo uxolo hahahahahahahahahahahahaha
yintoni le kufuneka uyihleke
Mholo!! Ndinengxaki yokuguqulela uncedo izarq..andikwazi ukuyisebenzisa ukuba akukho nto ndiyivayo !! Ndiyathemba ukuba ungandinceda enkosi !!!
Inolwazi olufanelekileyo kodwa ndicinga ukuba kungalunga ukongeza ulwazi oluncinci
Ipholile yonke into kodwa kungangcono ukuba banike imizekelo, aniyikholelwa na ?????????????
Uyolo lomfana sitsho
Mholo. Ungandinceda nceda? Ndinombuzo kuvavanyo endingaluqondiyo. Ngaba idwelisa iindlela ezahlukeneyo ezibandakanyiweyo kwimenyu yokuqalisa yemenyu yokuqala kwiWindows Vista, kwaye yenza ntoni nganye nganye? Ndincede Nceda…
Phendula ku HappyBoy
Molo ndingathanda ukwazi ukuba ifomathi yemixholo ifomathiwe njani kuvavanyo lwesikolo
Molo ndifuna uncedo olubaluleke kakhulu lomsebenzi kwaye ukuba ungandiphendula namhlanje ngcono kakhulu ...
Ewe, bandibuze umahluko phakathi kwemenyu yemeko yefestile yefestile kunye nefestile yefestile, kodwa andikwazi ukuchonga ukuba yeyiphi kwaye kufuneka ndibeke ukufana, kodwa kuba andazi ukuba zeziphi iiwindows, Andazi ukuba ndingabachonga njani.Ndixelele ubuncinci ukuba yeyiphi iwindows nceda enkosi
Ndiyabulela kakhulu ngokwenza olu hlobo lolwazi, oluchazwe kakuhle, ndikunika i-100
Phendula kwi germain
yeyiphi igarks enkulu yokundicacisela
ENKOSI, NDIKHONZA KAKHULU
I-FENKIU AMAZA AYIYINTONI IBERDAD AYITSHO LEYO NGOBA IBENZELWE I-COOLE TARE
Enkosi ngoncedo lwakho :)
U-Olaa wayeseklasini kwaye wandinceda ukuphumla .. Enkosi
Oku kundenzele umbulelo ongazenzisiyo, oku kundenze ndafumana ibanga elifanelekileyo kodwa andikufanelanga kuba ndiyikope
Mholo. Umsebenzi bandibuze: 8. Dwelisa umxholo wemenyu yentsingiselo yedesktop yeWindows.
NGUBANI NA OWAZIYO UKUHLELA IMIYALELO YEMEKO?
molo ungandinceda ngalo mbuzo ...
Yahlulwe njani imenyu yokuma kwimeko (ezibalaseleyo)? ...
Molo, ungandinceda ngemenyu ezivelelayo, nceda?
Yeyiphi into embi abandinike 1 ngayo
Yeyiphi into elungileyo abandinike yona u-5 kulonto
dina muse sitsho
molo ndinengxaki kwimenyu yam yemeko yelizwi, xa ndicofa ekunene ibonakala kodwa inyamalale kwangoko ... ndicela umntu andincede
Phendula ku dina musa
I-Boeing izobe umfanekiso wenqwelomoya ngexesha lovavanyo lwenqwelomoya